Fanasana amin'ny fanjakan'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-04 > Fanasana amin'ny Fanjakan'Andriamanitra
Samy manana ny mety sy ny tsy mety ny rehetra ary samy nanao ny tsy mety na dia samy araka ny heviny avy aza ny rehetra. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana.
Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy mahatanty eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny feon'ny fieritreretana madio. Fantatr'izy ireo fa tokony hankatò azy izy ireo, nefa fantatr'izy ireo koa fa tsy izy ireo. Mahatsiaro menatra ianao ary mahatsiaro meloka. Ahoana no ahafahana manavotra ny trosany? Ahoana ny fomba hanazavana ny saina? "Andriamanitra ny famelan-keloka", hoy ny faran'ilay teny lehibe. Ilay Andriamanitra mihitsy no mamela heloka.
Betsaka ny olona no mahalala an'io teny io, nefa tsy mino izy fa Andriamanitra dia ampy hamelana ny fahotany. Mbola mahatsapa meloka ianao. Mbola matahotra ny fisehoan'Andriamanitra sy ny andro fitsarana izy ireo.
Ny hafatr'i Jesosy, ny hafatry ny hazo fijaliana, dia vaovao tsara ho an'ireo rehetra meloka. Jesosy, Andriamanitra sy ny olona iray dia nanaiky ny famaizana antsika. Ny famelan-keloka dia omena izay rehetra manetry tena kokoa hino ny filazantsaran'i Jesoa Kristy. Mila izany vaovao mahafaly izany isika. Ny filazantsaran'i Kristy dia mitondra fiadanan-tsaina, fahasambarana ary fandresena manokana.
Ny tena filazantsara, dia ny vaovao tsara, dia ny filazantsara izay notorin’i Kristy. Filazantsara iray ihany no nitorian’ny apostoly: Jesoa Kristy nohomboana (1. Korintiana 2,2), Jesosy Kristy ao amin’ny Kristiana, fanantenana ny voninahitra (Kolosiana 1,27), ny fitsanganana amin’ny maty, ny hafatry ny fanantenana sy ny fanavotana ho an’ny olombelona. Izany no filazantsaran’ny fanjakan’Andriamanitra izay notorin’i Jesosy.
Ny vaovao mahafaly ho an'ny rehetra
«Fa rehefa voafatotra Jaona, dia tonga tany Galilia Jesosy ka nitory ny filazantsaran’Andriamanitra nanao hoe: Efa tonga ny andro, ka efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Mibebaha sy mibebaha ary minoa ny filazantsara!" (Markus 1,14”15). Io filazantsara nentin’i Jesosy io dia ny “vaovao tsara” – “hafatra mahery izay manova sy manova ny fiainana. Ny filazantsara dia tsy vitan’ny hoe mandresy lahatra sy mampiova fo, fa amin’ny farany dia hampihorohoro izay rehetra mandà izany. Ny filazantsara dia “herin’Andriamanitra izay mamonjy izay rehetra mino azy” (Romana 1,16). Ny filazantsara dia fanasan’Andriamanitra antsika mba hanana fiainana amin’ny ambaratonga hafa tanteraka. Ny vaovao tsara dia misy lova miandry antsika izay ho antsika tanteraka rehefa hiverina i Kristy. Fanasana ho amin’ny zava-misy ara-panahy mampatanjaka izay mety ho antsika amin’izao fotoana izao koa izany. Antsoin’i Paoly hoe “fitoriana ny filazantsaran’i Kristy” ny filazantsara (1. Korintiana 9,12).
“Filazantsaran’Andriamanitra” (Romana 15,16) sy ny “Filazantsaran’ny fiadanana” (Efes 6,15). Nanomboka tamin’i Jesosy, dia nanomboka namaritra indray ny fomba fijerin’ny Jiosy ny fanjakan’Andriamanitra izy, ka nifantoka tamin’ny hevitry ny rehetra momba ny fiavian’i Kristy voalohany. Jesosy, izay nirenireny teny amin’ny arabe feno vovoka tany Jodia sy Galilia, dia, araka ny ampianarin’i Paoly, izao no “Kristy nitsangana tamin’ny maty, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra sady” Lohan’ny hery sy ny fahefana rehetra” (Kolosiana). 2,10). Araka ny voalazan’i Paoly, ny fahafatesan’i Jesosy Kristy sy ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty no “voalohany” ao amin’ny filazantsara; ireo no zava-nitranga manan-danja ao amin’ny drafitr’Andriamanitra (1. Korintiana 15,1-11). Vaovao mahafaly ho an’ny mahantra sy ampahorina ny filazantsara.Misy tanjona ny tantara. Amin'ny farany, ny lalàna no handresy fa tsy ny fahefana.
Ny tanana nanindrona dia nandresy tamin'ny totohondry mihetsika. Ny fanjakan'ny faharatsiana dia manome lalana ny fanjakan'i Jesosy Kristy, fandaharana iray izay efa ananan'ireo Kristiana amin'ny ampahany.
Notsindrian’i Paoly ity lafiny amin’ny Filazantsara ho an’ny Kolosiana ity: “Misaora amin’ny fifaliana ny Ray, Izay nanao anareo ho mendrika ho lovan’ny olona masina ao amin’ny mazava. Izy no nanafaka antsika tamin’ny fahefan’ny maizina ka nametraka antsika tao amin’ny fanjakan’ny Zanany malalany, izay ananantsika fanavotana, dia ny famelan-keloka » (Kolosiana). 1,12 ary 14).
Ho an’ny Kristianina rehetra, ny filazantsara dia zava-misy ankehitriny sy fanantenana ho avy. I Kristy nitsangana tamin'ny maty, ny Tompo dia mihoatra ny fotoana, ny habaka ary ny zava-mitranga eto ambany dia tompon-daka ho an'ny Kristianina. Izay nasandratra ho any an-danitra no loharanon’ny hery manerana izao rehetra izao (Efes3,20- iray).
Ny vaovao tsara dia ny nandresen’i Jesosy Kristy ny vato misakana rehetra teo amin’ny fiainany teto an-tany. Ny lalan'ny hazo fijaliana dia lalana sarotra nefa mandresy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no nahatonga an’i Paoly hamintina ny Filazantsara amin’ny fomba fohy manao hoe: “Fa nataoko fa mety ny tsy hahalala na inona na inona eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, Izay nohomboana tamin’ny hazo fijaliana” (1. Korintiana 2,2).
Rehefa niseho tany Galilia i Jesoa ary nitory ny filazantsara tamin-kafanam-po dia niandry valiny izy. Manantena valiny avy amintsika koa izy anio. Fa ny fanasan'i Jesosy hiditra ny fanjakana dia tsy natao tao anaty banga. Ny fiantsoan'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra dia niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana mahatalanjona nahatonga ny firenena iray izay nijaly teo ambanin'ny fanjakan'ny romana hipetraka ary hanamarika. Izany no antony iray tsy maintsy nanazavan'i Jesosy mazava ny tiany holazaina amin'ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy dia niandry mpitondra izay hamerina amin'ny laoniny ny fireneny tamin'ny andron'i Davida sy Solomona. Saingy ny hafatr'i Jesosy dia "revolisionera indroa", araka ny nosoratan'ny manam-pahaizana Oxford, NT Wright. Voalohany, noraisiny ny fanantenan'ny besinimaro fa hisy superstate jiosy hanary ny zioga romana ary hanova azy ho zavatra hafa tanteraka. Navadiny ho hafatra mitondra famonjena ara-panahy ny fanantenana miely patrana amin'ny fanafahana politika: ny filazantsara!
“Efa mby akaiky ny fanjakan’Andriamanitra, hoy Izy, nefa tsy araka izay eritreretinareo akory”. Nanaitra ny olona i Jesosy noho ny vokatry ny vaovao tsara nataony. “Fa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany.” (Matio 1 Kor9,30).
“Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify”, hoy izy tamin’ireo Jiosy mpiray tanindrazana taminy, “raha hitanareo eo amin’ny fanjakan’Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba mbamin’ny mpaminany rehetra, fa ianareo kosa voaroaka.” ( Lioka 13,28).
Ny fanasana lehibe dia natao ho an’ny rehetra (Lioka 14,16-24). Nasaina ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra koa ny Jentilisa. Ary ny faharoa dia tsy latsa-danja amin'ny revolisionera.
Io mpaminany Nazareta io dia toa nanana fotoana betsaka ho an’ireo mpandika lalàna — hatramin’ny boka sy kilemaina ka hatramin’ny mpamory hetra tia vola — ary indraindray aza ireo mpampahory romana tsy tia. Nifanohitra tamin’izay nantenaina rehetra ny vaovao tsara nentin’i Jesosy, eny fa na dia ny an’ny mpianany nahatoky aza (Lio 9,51-56). Imbetsaka i Jesosy no nilaza fa ny fanjakana izay andrasan’izy ireo amin’ny hoavy dia efa tena eo amin’ny asany. Hoy izy, taorian’ny fisehoan-javatra iray nampitolagaga indrindra: “Fa raha ny rantsan-tànan’Andriamanitra no amoahako fanahy ratsy, dia efa tonga aminareo ny fanjakan’Andriamanitra.” (Lioka. 11,20). Raha lazaina amin’ny teny hafa, ny olona nahita ny fanompoan’i Jesosy dia nahita ny ankehitriny amin’ny ho avy. Tamin'ny fomba telo fara fahakeliny, Jesosy dia nanova ny zavatra andrasana amin'izao fotoana izao:
Nampianarin’i Jesosy ny vaovao tsara fa fanomezana madio ny fanjakan’Andriamanitra — ny fitondran’Andriamanitra izay nitondra fanasitranana. Noho izany, Jesosy dia nanorina ny “taonan’ny fahasoavan’ny Tompo” (Lio 4,19; Isaia 61,1-2). “Nampiditra” tao amin’ny Reich anefa ireo sahirana sy mavesatra entana, ny mahantra sy ny mpangataka, ny zaza maditra sy ny mpamory hetra mibebaka, ny mpivaro-tena mibebaka sy ny olona ivelan’ny fiaraha-monina. Ho an’ny ondry mainty sy ny ondry very ara-panahy, dia nanambara ny tenany ho mpiandry azy ireo izy.
Teo koa ny vaovao tsaran’i Jesosy ho an’ireo izay te hiverina amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fibebahana marina. Ireo mpanota mibebaka amim-pahatsorana ireo dia hahita Ray malala-tanana ao amin’Andriamanitra izay mitady ny faravodilanitra ho an’ireo zanany lahy sy vavy izay mirenireny ary mahita azy ireo rehefa “mbola lavitra” izy ireo (Lioka 1.5,20). Ny vaovao tsaran’ny Filazantsara dia midika fa na iza na iza niteny tamin’ny fony hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota.” ( Lioka 1 Kor.8,13) ary mihevitra amim-pahatsorana fa hahita fihainoana feno fangorahana Andriamanitra. foana. « Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava dia hahita ianareo; dondòny dia hovohana ianareo » (Lio 11,9). Ho an’ireo izay nino sy niala tamin’ny lalan’izao tontolo izao, dia izany no vaovao tsara indrindra reny.
Ny filazantsaran'i Jesoa dia midika ihany koa fa tsy misy mahasakana ny fandresen'ny fanjakana nentin'i Jesosy - na dia toa mifanohitra aza izany. Io fanjakana io dia hiatrika fanoherana mangidy, tsy misy hatak'andro, fa amin'ny farany dia handresy amin'ny hery sy voninahitra avy any an-danitra.
Hoy i Kristy tamin’ny mpianany: “Fa rehefa tonga ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, miaraka amin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny Izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany. Ary hanavaka azy Izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ny osy” (Matio 2.5,31- iray).
Ny vaovao tsaran’i Jesosy dia nanana fihenjanana mahery vaika teo amin’ny “efa ankehitriny” sy ny “tsy mbola”. Ny filazantsaran’ny fanjakana dia niresaka momba ny fitondran’Andriamanitra, izay efa nisy — “Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa, diovina ny boka, mandre ny marenina, mitsangana ny maty, ary torina ny filazantsara ny malahelo” (Matio. 11,5).
Fa ny fanjakana dia "tsy mbola" tao an-tsaina na dia feno aza ny fahatanterahan'izany. Ny fahatakarana ny filazantsara dia midika hoe fahazoana an'ity lafiny roa ity: amin'ny lafiny iray, ny fisian'ny mpanjaka nampanantenaina izay efa miaina amin'ny olony, ary amin'ny lafiny iray, ny fiverenany tampoka.
I Paoly misionera dia nanampy tamin'ny fanombohana ny Hetsika Lehibe faharoan'ny Filazantsara - ny fielezany avy any Jodia kely ka hatrany amin'ny tontolo grika-romanina be kolontsaina tamin'ny tapaky ny taonjato voalohany. Paoly, ilay mpanenjika Kristiana niova fo, dia mitarika ny fahazavana manjamba ny filazantsara amin’ny alalan’ny fiainana andavanandro. Rehefa nidera an’i Kristy nomem-boninahitra izy, dia niahy ny amin’ny vokatra azo ampiharina avy amin’ny filazantsara koa izy. Na dia teo aza ny fanoherana feno fanatika, i Paoly dia nampita tamin’ny kristiana hafa ny hevitry ny fiainan’i Jesosy, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty: “Ianareo koa, izay vahiny sy nankahala ny asa ratsy fahiny, dia efa nampihavaniny tamin’ny fahafatesan’ny nofony. ny tenanareo, dia mipetraha eo anatrehany ho masina sy tsy misy tsiny ary tsy misy pentina; raha mitoetra amin'ny finoana ianareo ka tafaorina tsara ary tsy miala amin'ny fanantenana ny filazantsara, izay efa renareo sy notorina tamin'ny olombelona rehetra ambanin'ny lanitra. Izaho Paoly dia mpanompony » (Kolosiana 1,21ary 23). Nihavana. tsy misy kilema. Fahasoavana. Famonjena. famelan-keloka. Ary tsy amin'ny ho avy ihany, fa eto sy ankehitriny. Izany no filazantsaran’i Paoly.
Ny fitsanganana amin’ny maty, ny fara-tampony izay nitondran’ny Sinoptika sy Jaona ny mpamaky azy (Jaona 20,31), dia manafaka ny hery anaty ao amin’ny filazantsara ho an’ny fiainan’ny Kristianina isan’andro. Manamafy ny filazantsara ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty.
Noho izany, hoy i Paoly dia mampianatra fa ireo fisehoan-javatra tany Jodia lavitra ireo dia manome fanantenana ny olona rehetra: “Tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra no mamonjy izay rehetra mino azy, ny Jiosy aloha vao ny Grika koa. Fa ao no anehoana ny fahamarinana izay manan-kery eo anatrehan’Andriamanitra, izay avy amin’ny finoana amin’ny finoana ». (Romana 1,16- iray).
Manampy lafiny hafa amin’ny filazantsara ny apostoly Jaona. Izany dia mampiseho an’i Jesosy ny amin’ny “mpianatra tiany” (Jaona 19,26), nahatsiaro azy, lehilahy manana fon’ny mpiandry, mpitarika fiangonana manana fitiavana lalina ny olona amin’ny fanahiany sy ny tahony.
« Ary Jesosy nanao famantarana maro hafa koa teo anatrehan’ny mpianany, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity. Fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak’Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin’ny anarany amin’ny finoana” (Jaona 20,30:31).
Ny fampisehoana ny filazantsara momba an'i Jaona dia manana ny fototr'io fanambarana miavaka io: "mba hanananao fiainana amin'ny finoana". Nanao fahagagana iray hafa tamin'ny filazantsara i Jaona: Jesosy Kristy tao anatin'ny fotoana fohy nanakaiky ny tenany manokana. Jaona dia manome fitantarana mivantana momba ny maha izy azy sy manompo eo alohan'ny Mesia.
Ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona, dia mihaona amin’i Kristy izay mpitory teny nahery vaika isika (Jao 7,37-46). Hitantsika fa mafana sy tia mandray vahiny i Jesosy. Avy amin’ny fanasany manasa hoe “Avia ary jereo!” (Johanes 1,39) hatreo amin’ny fanamby ho an’i Tomasy misalasala hametraka ny rantsan-tanany eo amin’ny ratra teo amin’ny tanany (Jaona 20,27), ilay olona tonga nofo sy nonina teo anivontsika dia aseho amin’ny fomba tsy hay hadinoina (Jaona ). 1,14).
Nahatsiaro ho noraisina tsara sy nahazo aina tokoa ny olona niaraka tamin’i Jesosy, ka nifanakalo hevitra taminy (Jao 6,5faha-8). Nandry teo akaikiny izy ireo raha nihinana sy nihinana tamin’ny lovia iray ihany3,23-26). Tena tia azy izy ireo ka raha vao nahita azy dia nilomano teny amoron-dranomasina hiara-mihinana hazandrano izay efa nanendany ny tenany.1,7- iray).
Ny Filazantsaran’i Jaona dia mampahatsiahy antsika fa manodidina an’i Jesosy Kristy ny filazantsara, ny ohatra nasehony ary ny fiainana mandrakizay izay raisintsika amin’ny alalany (Jao. 10,10).
Mampahatsiahy antsika izany fa tsy ampy ny mitory ny filazantsara. Tsy maintsy miaina izany koa isika. Mampirisika antsika ny apostoly Johannes: Mety ho resin’ny ohatra asehontsika ny hafa mba hizara amintsika ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra. Izany no nitranga tamin’ilay vehivavy samaritana izay nifanena tamin’i Jesoa Kristy teo amin’ny fantsakana (Jaona 4,27-30), ary i Maria Magdalena (Jaona 20,10:18–).
Ilay nitomany tao am-pasana Lazarosy, ilay mpanompo manetry tena izay nanasa ny tongotry ny mpianany, dia mbola velona ankehitriny. Manome antsika ny fanatrehany izy amin'ny alàlan'ny fanamafisan'ny Fanahy Masina:
“Izay tia Ahy dia hitandrina ny teniko; ary ny raiko ho tia azy, dia hankao aminy izahay ka handry ao aminy ... aza matahotra na matahotra » (Jaona 1.4,23 ary 27).
Mazoto mitarika ny olony amin’ny alalan’ny Fanahy Masina i Jesoa ankehitriny. Tena manokana sy mampahery toy ny hatramin’izay ny fanasany: “Avia, jereo!” (Johanes 1,39).